Wholesale Matrix Muviri PDC Drill Bit fekitori uye vatengesi | YakadzikaFast
Main Cutter Saizi
Kamwene Qty (mhando)
Junk Slot Nzvimbo
Kubatana kwe API
Matrix Bits ndiwo mhinduro kwayo yekuchera tsime uko kushandiswa kwesimbi simbi mabheti kunotungamira mukukasira kwavo kukurumidza kupfeka.
Kugadzira matrix chidimbu chemuviri kubva kune chakasanganiswa zvinhu zvichibva pane tungsten carbide inobvumira mabititi kuchera mumatunhu akakwirira ane hasha uchishandisa uremu hwekuchera matope.
Kunyanya kusarudzwa zvinhu zvinyorwa zvinopa kuvimbika kwakasimba uye kusimba kweinoramba ichiita zvishoma kumhanya. Yakagadziridzwa dhizaini uye yekugadzira matekinoroji zvinoita kuti zvikwanise kuburitsa akasiyana siyana ekuchera maturusi.
Matrix maturusi anogona kuwanda pasi pekudzoserwa. Iyi ficha inobvumidza kuwedzera yehupenyu-nguva yezvishandiso uye kuzadzisa yakakwira mareti.
Matrix Muviri PDC Drill Bityakakodzera masvikiro akaomarara uye akaomarara mafomati ane optimized korona mbiri uye cutters marongero. Inogona kuita zvirinani kuita mune zvakadzama zvikamu. Hupenyu hwakareba hwebasa uye kuita kwakanyanya kunobatsira kudzikisa mutengo wekuchera.
Durasef Gauge: Super yakasimba zvinhu zvinokurudzira geji yekupfeka kuramba kuwedzera hupenyu hwakareba.
Hydraulics: Iko kufambisa uye kutonhora kwematemwa kunogona kukwidziridzwa neiyo hydraulic dhizaini inoenderana iyo chip yakawanda uye kusuduruka kweumwe neumwe banga
Yakasarudzika Blade Dhizaini: Kuunza yega yekucheka mazino uye yakasarudzika yakakomberedzwa blade dhizaini inovandudza kugona kwekuchera mune yakaoma interlayer.
Iyo fomula yematriki poda:kodzero dzakazvimirira dzehungwaru uye epamberi sintering tekinoroji yagadzira michina zvimiro zvematrice kusvika padanho repasi rose. Nhare yematrice drill inogona kugadzirirwa kudzika uye kuderera. Inogona zvachose kugutsa yakaoma kuchera oparesheni mutsime.
Kodhi yeIADC M323
Nhamba yeBlade 6
nhamba yemabhomba 5
Vatema Vese 36
Main Cutter Saizi 1/2 "(16mm)
Gauge Kureba 2.0 "(50.8cm)
Junk Slot Nzvimbo 15.9in2 (102.6cm2)
Kubatana kwe API 4-1 / 2 ”Reg.
Yakakurudzirwa Mashandiro Ekushandisa:
Kuyerera rate Zana: 100 ~ 350 GPM / 21 ~ 35 L / S.
Yekumhanya Speed 60 ~ 300 RPM
Kurema pane zvishoma 3 ~ 15Klbs / 20 ~ 110 KN
Sanganisa Kurema pane zvishoma 20Klbs / 90 KN
Imwe Matrix Muviri PDC Bit Yakaboorwa Zvakabudirira muXujiahe Layer
Kuti udzikise huwandu hwePDC Bit kuchera muXujiahe Layer muSichuan yeChina. Chinese chidiki inogadzira edza kugadzira yakakwidziridzwa PDC bit yekuboora neIMWE BIT.
Yakadzika inopa iyo yayo yakagadzirirwa
Matrix Muviri PDC Bit 12 1/4 DF 1605BU kuwedzera hupenyu hwese hwekuboora zvishoma.
Inoisa Roprecord nyowani ye7.13
Iyo bhatiri rakaboorwa zvinobudirira mune iyo dura neIye Biti chete
MuSichuan yeChina. iyo fomati iri yepakati-yakaoma asi hasha, Great Wall Drilling Kambani yeCNPC inoedza kuwedzera kuchera mifananidzo uye kudzikisa huwandu hwePDC bits muXujiahe Layer. Mune ino dura, kudzika kuri kubva 1300 kusvika 1900 uye iyo compress simba iri 12000PSI-16000PS1. Deefast dhizaini iyo Matrix Muviri PDC Bit 12 1/4 "DF1605BU yechirongwa ichi.
Iyo Matrix Muviri PDC Bit 12 1/4 "DF 1605BU chidiki chakagadziridzwa chakanyanya kugadzirirwa kuwedzera simba uye hupenyu hwezvibhakera. Fomura yematrice poda ine kodzero dzakazvimirira dzezvivakwa uye tekinoroji yepamberi yekukwirisa yagadzira michina zvimiro zvematrice kusvika iyo yepasirese yepamberi nhanho. Super yakasimba zvinhu zvinokurudzira gauge kupfeka kuramba kuita kuti huve hwakareba hupenyu.Iine hunhu hweyakakura muhombe kumhanya kugadzikana uye hurefu hupenyu hwehupenyu uchichera.
Inoita yakanakisa ROP ye10.
Ese mabiti akachera zvakabudirira mudenga neIye Biti chete.
Zvadaro: Two-Stage uye Two-Speed ​​Drilling Tools